"I-Lookout Dome" e-Belleisle Bayview Retreat - I-Airbnb
"I-Lookout Dome" e-Belleisle Bayview Retreat
Long Point, New Brunswick, i-Canada
Ikamelo e-itende ibungazwe ngu-Andrew
Balekela emhlabeni wangempela kule ndlela yokubaleka ecashile! Jabulela ubumfihlo beqiniso e-Lookout Dome futhi uzwe i-visceral yemvula nomoya ngenkathi uthokomele ngaphakathi (indawo yomlilo ye-propane) ezungezwe izihlahla ezinokubukwa kokushona kwelanga. Indawo yokuphumula ezovumela izihambeli ukuthi zizizwele isikhathi esivumela ukuphumula kwangempela ngaphandle kweziphazamiso. Khipha, khulula futhi ukhiphe!
Ngesikhathi sasehlobo (May 1 - Oct 31) zonke izinsiza ziyatholakala emphemeni wangaphandle, okuhlanganisa ishawa eshisayo, ikhishi elinazo zonke izitsha, ibhokisi leqhwa, indlu yangasese yomquba, I-BBQ enepuleti elishisayo nomgodi womlilo.
Phakathi nenkathi yasebusika (Nov 1 - April 30) ideski iyavalwa ngaleyo ndlela kunikeza okuhlangenwe nakho kwasebusika "I-Dry Camping" - Izivakashi kufanele zilethe amanzi nokudla okuphekiwe noma isitofu esizokupheka, indlu yangasese ye-RV inikezwa izivakashi ngaphakathi.
4.87 · 276 okushiwo abanye
Itholakala kumahektha ayi-15 egqumeni elibheke i-Bates Landing kanye ne-Bellisle Ferry - ukufinyelela olwandle lomphakathi kanye nokwethulwa kwesikebhe. Ukuhamba ngezinyawo noma ukugijima - umgwaqo owubhuqu wezwe elithulile eduze, amahlathi, imakethe yabalimi ngaphansi kwendlu. Abathandi bemvelo baphupha ngokufezeka nge-Strawberry U-pick ngoJuni, i-Apple u-pick ngo-Aug kanye nePumpkin ngo-Sep.
Ngihlala ngitholakala kodwa futhi nginikeze izivakashi indawo yazo. Ngihlala emagcekeni futhi ngingasiza ngezidingo uma ngicelwa.